Zantedeschia - isitshalo ebukekayo we Araceae umndeni, ngemuva kwalokhu ozobizwa abantu noma calla calla. Leyo ezithakazelisayo igama imbali ubophekile Kurt Sprengel - sezitshalo German owawunikeza behlonipha esisebenza naye Italian Giovanni Zantedeschia. Zisetshenziswa lenkaba isiko taseNingizimu Afrika letisemtsetfweni lekunguleti izindawo zakhe ezimanzi exhaphozini. Ngo medium yemvelo kungenziwa waphawula ukuthi ingxenye iziqu kanye nezimpande Zantedeschia ngokuvamile egxilile ngokuphelele emanzini.
Ukuphakama Zantedeschia, abanakekela ekhaya ngoba esidinga ulwazi oluthile namakhono, ifinyelela kusuka 1.0 kuya 2.5 amamitha. Ihamba izitshalo ezinkulu (mayelana 40 cm ubude), inhliziyo emise, wahlela kwi petioles eside okukhulu. Umbala - oluhlaza, namabala nezinala ukhilimu-anemibala noma amhlophe. Isiqu uqonde, esigaxeni branched, onamandla. Zantedeschia, ukunakekelwa ekhaya ngoba okuletha eziningi abathandi inhlekisa imbali kweqiniso zasendlini, abantu abavamile ngokuthi ikhaya Calle.
isitshalo izimbali zawo ziwukudla Tropical nenhle kakhulu, izimbali ezinkulu, olubekwa peduncles okusezingeni eliphezulu oqondile. Inflorescence - uJakobe Yellow, nge eside (mayelana 15-cm) coverlet. Umbala wayo wehlukile: ukhilimu, ophuzi, onsomi, omhlophe, pink. Abazalanisi ezifuywa izinhlobo, elinesimo ingubo-umbala ezimbili-uhlobo lokuzijabulisa. Ezimweni eziningi wamboza amathoni ezinemibala ambalwa alula kakhulu kunomoya ngaphandle. Izimbali Zantedeschia - into eside, iqala lapho kuqala izinsuku ekwindla kanye ihlala kuze entwasahlobo. Ngemva izimbali, ukwakheka amajikijolo yellow, has a ububanzi of mayelana 1 cm. Isikhathi ukuphumula uqobo 2 izinyanga futhi ngesikhathi izitshalo ekhaya ehlobo.
Izici yokukhula calla ikhaya
Kulinywe amateur of Zantedeschia aethiopica, ukunakekelwa ekhaya ngoba edinga amanye utshalomali zomsebenzi, ezingezwakali ngaphezulu; isitshalo ukuthandwa eziningi ukukhanya ehlobo futhi ebusika, kodwa uyakwazi kahle hle ukuzivumelanisa nezimo ezahlukene kakhulu. Winter isilwane kungenzeka ukuhlela izibani ezengeziwe, usebenzisa ukukhanya Fluorescent. Ngenxa izitshalo ukushisa-onothando, ikhaya calla (Zantedeschia aethiopica) ezizwa ezingeni lokushisa hhayi ngaphansana 18 ° C, eliphezulu ukuthuthukiswa evamile wayo nokukhula kwayo kuyisimangaliso imbali +22 ... + 23 ° C lokushisa umehluko kanye okusalungiswa - izici okuyizinto kakhulu sengqondo esingaqondile Zantedeschia.
Imbali ekhaya: ukunakekelwa, ukutshalwa
Isihluthulelo esiyinhloko ekwandeni yimpumelelo nokuthuthukiswa imbali nomswakama. Kuze kube yimanje, izitshalo zidinga amahlamvu fafaza njalo futhi Sula ngendwangu emanzi. Umhlali emaxhaphozini, Zantedeschia idinga ukuthambisa njalo yezibusiso evela kuNkulunkulu kwentwasahlobo kuze ekwindla. amanzi Irrigation okumelwe livikelwe, elithambile, ekamelweni lokushisa. kahle kakhulu ukuphulula iyaphendula yokubakhona 3-5-cm ungqimba amanzi kuso. Phakathi supply quiescent yamanzi iyadingeka ukwehlisa, futhi kwezinye izinhlobo kanye ayeke nhlobo.
Efaka umquba calla ikhaya
Esikhathini sokukhula asebenzayo kusuka February kuya ku-June, Zantedeschia enhle, anakekele ekhaya ngoba okungadingi ibange inkathazo kakhulu, edinga efaka umquba: amaminerali (izidakamizwa "zasePocono", "Agricola", "Fertikov Suite", "Bona Forte" ) kanye organic (umquba, humus, umquba ibolile, ukulungiselela "Giant"). Organic isilwane zasendlini liyadingeka ukuze kwakhiwe isihlahla esihle esebenzayo leaf ukukhula ebanjwa njalo emavikini nelesithupha. Indaba amaminerali iqukethe iphesenti eliphezulu phosphorus kanye potassium, yizona zihluthulelo a zezimbali yimpumelelo.
Kuyadingeka ukuze ukhiqize izitshalo ukufakelwa yonyaka, njengoba ngamunye yokukhula calla (Zantedeschia), anakekele ekhaya okuyiwona akakubangeli nobunzima ethile, bawuphundle kakhulu inhlabathi. Plant umthamo kumelwe ube mkhulu, nge substrate izakhi futhi abophe pyatisantimetrovym amanzi ungqimba, angasetshenziswa ukuze Ceramic noma indawo enwetshiwe ubumba shards. Kuye ngobukhulu we tuber itshalwe ngesikhathi ngamasentimitha 5 kuya ku-10 ukujula. Optimum Soil Ukwakheka - izingxenye ezimbili Turf, kwenye ingxenye ishidi, Peat umhlaba nesihlabathi ne umquba noma humus - njengoba ingxenye eyodwa.
Lapho Zantedeschia izimbali
Zantedeschia imbali, ukunakekelwa ekhaya ngoba wezimbali eletha ulwandle fun iqala eminyakeni emibili emva kokutshala. Izimbali okuqala okhanyayo (ngezinye izikhathi ogqamile) umbala. Ngokuhamba kwesikhathi, lo umbala uba zokulala te ngaphezulu. Isikhathi izimbali ihlala izinyanga eside ngokwanele, futhi ngezinye izikhathi eziningana. Ngo ezinhle ukukhanya ikhaya calla izimbali zawo ziwukudla ekupheleni kwekwindla futhi Ungajabulisa umbala ebukekayo zonke ebusika.
Ngemva zom Zantedeschia udinga ukuphumula; inkathi Kunconywa lokuphumula - izinyanga nengxenye. Lesi sitshalo udinga ukwehlisa ukuthambisa phakathi ehlobo msulwa amahlamvu izinsalela ukuze ome emoyeni futhi zidluliselwa ku entsha, izakhi substrate. Ungakwazi umhlaba okwesikhashana isitshalo emhlabathini evulekile, isibonelo, engadini, futhi ngo-August ukubuyela "ekhaya." Lezi zimila ezikhula kabusha amahlamvu ihambisane Ekuqaleni autumn.
Lokuzaliswa Zantedeschia ekhaya
izinhlobonhlobo Tuberous Zantedeschia zizalela izingane, okungase ahlukaniswe ngokuhamba yaminyaka yonke ukufakelwa izitshalo. Futhi, izikhathi ezimbili noma ezintathu ngonyaka ukuqinisekisa i zezimbali obuningi futhi ngenjongo rejuvenation Zantedeschia balindzeleke kwekutsi bakhicite nezilimo eziyizigaxa noma rhizomes of the division, kuncike sesitshalo. Ingungu yensimbi ekhaliswayo ngokushaywa wabakhombisa izandla kangcono ngaphandle kokusebenzisa ummese kanye namanye amathuluzi ahlabayo.
Kukhona indlela kwesidoda yokuzalana lingaphansi ethandwa phakathi balimi. Ukuhluma kwezinhlobo imbewu impela high, kodwa indlela sidzinga ukubekezela: likhule ngale ndlela uyojabula zom eminyakeni kuphela emva 4-5 emva kokutshala izitshalo. Uma izinhlelo umtshali-fan akulona isifiso sikhule Zantedeschia kusuka imbewu, kubalulekile ukuba uhlukane imicibisholo sezimbali kuye kwaphela. Lokhu kuyokwenza ugcine inani elikhulu amandla isitshalo kudingeka ukuba kalula wazibonela ukuphumula isikhathi calla (Zantedeschia).
Unakekela Isihlobo imbali ekhaya: ukulawula inkathazo
In imvelo zasendlini kungalima- calla yizimbuzane, kuyalinqoba isitshalo endlini nge ngokweqile emoyeni elomile. amahlamvu athintekayo babe flabby futhi ngemva kwesikhathi ukuncipha. Ngakho-ke, ukuze ugweme ukunqotshwa lokhu inkathazo zidinga sishaye gqwa ngamanzi.
ingozi Omkhulu ekamelweni isiko kukhona thrips, aphid kanye whiteflies. amakoloni eziningi zilokazane decolorized Zantedeschia futhi deform amaqabunga awo, ngezinye izikhathi kuholela ekulahlekelweni inani imbali. Ungazama ukususa indlela yabo kazwelonke, esesula isitshalo ukotini pad ofakwe isixazululo insipho. Ngo lubucayi kakhudlwana izilonda ekhaya imbali ukusebenzisa zinambuzane sishaye 1 ml "malathion" buhlanjululwe in 1 ilitha lamanzi, noma izidakamizwa "aktellik".
Zantedeschia ukuxubana, ukunakekelwa ekhaya okuyiwona oziphakamisa kwemizwelo futhi kuyayithokozisa - isitshalo esiyingqayizivele, ngifuna omkhulu ifomu elilodwa noma ilungiselelo imbali. It ekwazi ukuhlalisa abantu abangu eduze eminye imibala, isibonelo, ivy kanye bindweed.
Lily umndeni: izici nabameleli eyaziwa kakhulu